Ukufuna UThixo -Mnqule ngobudlelwane
by UKaren Wolff
Ngaba Ufuna Ubuso BukaThixo okanye Isandla SikaThixo?
Kuthetha ukuthini ukukhonza uThixo? UKaren Wolff we-Christian-Books-For-Women.com usibonisa ukuba sinokufunda okuninzi ngonqulo kuphela ngobudlelwane noThixo. "Ngaba Ufuna Ubuso BukaThixo okanye Isandla SikaThixo?" uza kufumana iitshixo ezimbalwa zokuvula intliziyo kaThixo ngokudumisa nokunqula.
Ngaba uke wachitha ixesha kunye neyanye yabantwana bakho, kwaye konke okwenzileyo kwakuvele "kuphelile?" Ukuba uye wakhula abantwana, kwaye ubabuza oko bakhumbula kakhulu malunga nobuntwana babo, ndiza kubaba bethe bakhumbula ixesha oye wachitha intambama ethatha inxaxheba kwimisebenzi emnandi.
Njengabazali, ngamanye amaxesha kuthatha ixesha ukuba sifumane into yokuba abantwana bethu bafuna kakhulu kuthi kuthi ixesha lethu. Kodwa ke, ixesha lihlala libonakala liyinto esiyifumanayo ngokufutshane.
Ndiyakhumbula xa unyana wam wayeseneminyaka emine ubudala. Waya esikolweni samabanga asekuhlaleni, kodwa kwakubalwa ezimbalwa ngeveki ngeveki. Ngoko, phantse ndiba nalo mntwana oneminyaka emine owayefuna ixesha lam. Yonke imihla. Yonke imini.
Ndiza kudlala imidlalo yebhodi kunye naye emini. Ndiyakhumbula ukuba sasisoloko sibiza ukuba "yiMkhosi weHlabathi," nawuphi na owenze ukuphumelela. Ewe, ukubetha oneminyaka emine ubudala akuyona nto into yokuziqhayisa malunga nokuqalisa kwam, kodwa kunjalo, ndandizama ukuqiniseka ukuba isihloko sidlulile emva nangaphambili. Ewe, maxa wambi.
Indodana yam kwaye mna ndiyakhumbula ngokuqinisekileyo loo mihla njengexesha elikhethekileyo xa sakha ubuhlobo. Yaye inyaniso kukuba, ndibe nzima ukuba ndithi kum unyana wam emva kokumanyanisa ubuhlobo obunjalo. Ndandisazi ukuba unyana wam wayengasindanga kunye nam ukuba azuze kum, kodwa ulwalamano esilwakha lwaluthetha ukuba xa ecela into ethile, intliziyo yam yayikulungele ukuyiqwalasela.
Kutheni kunzima ukubona ukuba njengomzali, uThixo akafani?
Ubudlelwane yiyo yonke into
Abanye babona uThixo njengeSanta Claus. Ngenisa nje uluhlu lwakho lwesifiso kwaye uza kuvuswa ngolunye usuku kusasa ukuba konke kulungile. Bahluleka ukuqonda ukuba ulwalamano luyinto yonke. Yinto enye uThixo ayifunayo ngaphezu kwayo nayiphi na into.
Kwaye xa sithatha ixesha lokufuna ubuso bukaThixo-oko kukutshala imali kwezobudlelwane obuqhubekayo kunye naye - ukuba ukhulise isandla sakhe ngenxa yokuba intliziyo yakhe ivulekile ukuva konke esikuthethileyo.
Kwiiveki ezimbalwa ezedlule ndafunda incwadi emangalisayo ebizwa ngokuba yi- Inspiration Day for Finding Favorites kunye noKumkani , nguTommey Tenney. Kwathetha ngokubaluleka nokufaneleka kweendumiso kunye nokunqula kwamaKristu ekwakheni ubuhlobo noThixo. Into endiyichukumisayo kukuba ukunyanzelwa kombhali ukuba ukudumisa kunye nokunqula kufuneka kuqondiswe ebusweni bukaThixo kungekhona isandla sakhe. Ukuba iinjongo zakho kukuthanda uThixo, ukuchitha ixesha kunye noThixo, ukufuna ngokwenene ukuba phambi koThixo, ngoko udumo lwakho kunye nokunqula kuya kuhlanganiselwa nguThixo ngeengalo ezivulekile.
Nangona kunjalo, iinjongo zakho kukuzama ukufumana intsikelelo, okanye ukugxininisa abo abajikelezile, okanye ukufezekisa imbopheleleko ethile, ulahlekelwe isikhephe. Ngokupheleleyo.
Uyazi njani ukuba ulwalamano lwakho noThixo lujolise ekufuneni ubuso bakhe endaweni yesandla sakhe nje? Yintoni ongayenza ukuze uqinisekise ukuba isisusa sakho sihlambulukile njengoko udumisa kwaye unqula uThixo?
Sebenzisa ixesha lakho kunye noThixo ekudumiseni nasekukhulekeleni. Ukumisa uThixo ukuba uthanda kangakanani kwaye uyamxabisa akaze agugile kuThixo. Enyanisweni, ukudumisa kunye nokunqula kuyintloko evula intliziyo kaThixo.
Yiza kuThixo nje ngokuba unentliziyo evulekile. Ukuvumela uThixo ukuba akubone konke okusemgangathweni yakho, okulungileyo okanye okubi, kwenza uThixo azi ukuba uyaluxabisa ubuhlobo bakho ngokwaneleyo ukumvumela ukuba akubone konke kwaye enze nantoni na ayifunayo.
Khangela amathuba okubonga uThixo kunye nokukhonza ezintweni ezikujikelezayo. Konke okufuneka uyenze kukubona ukushona kwelanga elihle okanye enye yezinye izinto ezimangalisayo zendalo ukuze unikezele uThixo udumo kunye nokubulela ngenxa yentsikelelo engummangaliso. UThixo uyabuxabisa intliziyo enombulelo.
Ungesabi ukubonisa uThixo indlela oziva ngayo ngokwenene njengoko unqula. Kukho abo abangaziva bakhululekile ukuphakamisa izandla zabo okanye babonise nayiphi na imvakalelo ngexesha leenkonzo zonqulo . Nangona kunjalo abo bantu banjalo banokufumaneka kwiimicimbi yezemidlalo okanye kwiikonsathi ezithintekayo, zibetha, kwaye zikhwaza njengento ebaluleke kakhulu. Anditsho ukuba kufuneka unqamle phezulu uphinde ukhuphe. Ukuma nje ngezandla ezivulekileyo kubonisa uThixo ukuba intliziyo yakho ivulekile kwaye ufuna ukuziva ubukho bukaThixo.
Kwaye kubaluleke kakhulu:
Musa ukugweba, jonga phantsi, okanye ugxeke ngomnye umntu ngenxa yokuba bafuna ukubonisa iimvakalelo namandla njengoko banqula. Kungenxa yokuba inkolelo yonqulo ihlukile kuneyakho, ayithethi ukuba ayifanelekanga okanye ingalunganga. Gxininisa ekunquleleni uThixo ngokwakho ukuze ugxininise ekwakheni ubuhlobo bakho noThixo.
Ukudumisa kunye nokunqula kukaKristu kungenye yezona ndlela ezinamandla kakhulu zokukunceda ukuba wakhe ubuhlobo bakho noThixo. Akukho nto ingcono kunokuba uzive nothando, uxolo kunye nokwamkelwa kobukho bukaThixo kukujikeleze.
Kodwa khumbula, njengomzali, uThixo ukhangele ulwalamano oluqhubekayo. Xa ebona intliziyo yakho evulekile kunye nomnqweno wokumazi ukuba ngubani, intliziyo yakhe ivule ukuva konke okumele uthethe.
Yiyiphi ingqiqo! Ukufuna ubuso bukaThixo uze uzive iintsikelelo esandleni sakhe.
Kwakhona nguKaren Wolff:
• Indlela yokuva kuThixo
• Ukwabelana Ngokholo Lwenu
• Indlela yokuxinezeleka kunye nomKristu ongakumbi kwiKrisimasi
• Ukukhulisa iNdlela kaThixo yeNtsana
Umyalelo wokuqala weBuddhist
Guru Nanak, Mardana, kunye noWali Qandhari (Khandari) e-Hasan Abdal
Iilwimi ezimbini zithetha 'Ukuba': 'Ser' kunye 'Estar'
Iifoto zePetra Kvitova: Igalari yefoto
Ukuzalwa Okumangalisa Ngamaxesha Amandulo Neengcamango
Ukufumana iMashishini eLawulayo
I-Charter Freedom eMzantsi Afrika
I-Biography ye-Matinee Idol u-Errol Flynn